Miteraka homamiadan'ny prostaty ve ny kafeinina? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Kanseran'ny prostaty kafe - vahaolana amin'ny
Kanseran'ny prostaty kafe - vahaolana amin'ny
Miteraka homamiadan'ny prostaty ve ny kafeinina?
Kanseran'ny kafe sy prostaty
Manome izany ny fikarohanakafeny fihinanana dia tsy mifandraika amin'ny risika mitombohomamiadan'ny prostaty. Famakafakana meta-cohort 6SYFanadihadiana 5 momba ny fanaraha-maso tranga tsy nisy fitaomanakafefanjifana amin'ny loza mety hitrangahomamiadan'ny prostaty71.
RAHA toa olona marobe ianao dia efa nisotro kapoaka na kopia roa. CALIFORNIA MITADY FAMPANDAHARANA FAMPIANARANA MOMBA NY COFFEE Aorian'ny famoahana ny chimika rehefa voahidy ilay kafe. PRESCOTT STEPHEN, FILOHA, NY FOTOTRA FOTSINY FITSABANA OKLAHOMA.
MANKASITRAKA EO EO ETO, IZAY MANKASITRAKA AZY, RAHA IZANY NO MPANDAINGA, IZAY REHETRA MITENY. INONA NO LAZAINAO? >> TOKONY Sotroiko ny kafe sy ny sakafonao. PROBABLY an'arivony ny vokatry ny fahasalamana amin'ny COFFEE.
TSY AZO AZA ATAO AZA ATAO NY CANCER. ARY AOKAO NY KALIFORNIA LAVA, FAMPITANDREMANA NY VAHOAKA. HAMPIASA AZY. >> TENA VOLA IHANY VOLA? TENA MAMONJY NY BAIBOLY MAMPAHAIKA IZANY. >> IZAY IHANY IHANY NO mitranga ao amin'ny tsimok'aretin'ny lalàna mifehy ny federaly izay mety hiteraka CANCER.
NOHO IZANY DIA MISY SIGNIFICANCE azo ekena. EFA VOAFETRA AZO AMIN'NY ZAVATRA REHETRA IZAY ATAONTSIKA DAHOLO AMIN'NY KERYSTIN NS. >> NY FANAMARIHANA REHETRA AMIN'NY COFFEE SY NY ZAVATRA REHETRA IZAO NOHOANA.
RAHA MISY DAHOLO, Hitanay IZAO IZAO. HITANTSIKA VOAFETRA KOSA KOKOA AMIN'NY ARETIN'NY KRISTIANA HATRANY. Azontsika antoka ny momba azy io. >> RAHA MAHALALA NY COFFEE TSY HAMONO ANTSIKA, TSARA ANTSIKA ITY? SA NEUTRAL IHANY? >> AZO antoka fa misy ny FIANARANA MOMBA NY FOMBA FAMPIANARANA FA NAHASOA NY COFFEE.
Antsoy sy haingana. TSY TOKONY HAMPITANDRINA ANAO NY COFFEE hisotroanao ho an'ny fahasalamanao. NY FAHASALOHAN'NY SAINAO dia mety ho NEUTRAL. >> MISY KAOSA VOLA TOKONY TOKONY HANAPOTSIKA? >> Nanomboka nisy fiantraikany tamin'ny torimasako io.
NY CAFFEINE Mahatonga anao hahatsiravina bebe kokoa. RAHA MBOLA MISY PANASA BE ANJARA, AZO ATAO HETRAKA EO AMIN'NY ZAVATRA REHETRA AMIN'NY fatorianao >> MISY FANONTANIANA AVY AMIN'NY FACEBOOK, FA MISY milaza hoe raha tsy manana ny kafe aho dia hampijaly ny hafa. NAHOANA NO IANAO IHANY NO Miaina? EFA Ela NY KOPE ARY NAMONJAKA NY COFFEE TAMIN'NY TAONAO IANAO. >> AVY ACRYLAMIDE REHEFA MANOMPO sakafo tsy mitovy.
IREO PROTEIN SY KARBOHYDRATSY REHETRA. NY OLONANA DIA MANDAIMA LALAKA NY VOKA FAHASALAMANA AZY NIA SATRIA AN'ity LALANA IZAO EO EO. >> Mieritreritra aho fa kely sisa no tsapantsika ankehitriny, izay efa mivoaka eto.
STEPHEN PRESCOTT MANKASITRAKA.
Ratsy ho an'ny prostaty ve ny kafe?
Ny kafe dia mety hanelingelina ny roany prostateSYnytatavia. Ny fandinihana iray dia nahitana fa ny lehilahy izay mihinana kafe 234 mg na mihoatra isan'andro dia 72 isan-jato no azo inoana fa tsy mahazaka urinary raha oharina amin'ireo lehilahy nisotro.nykafeinina kely indrindra
Homeko rohy amin'ity lahatsoratra manokana ity ianao amin'ny faran'ity lahatsoratra ity mba hahitanao azy rehetra. Niteraka fanontaniana maro isan-karazany izany, saingy ny iray izay naverina imbetsaka dia ny hoe: 'Mampatanjaka ny fananganana ve ny kafeinina? Tsara ho an'ny tsy fetezan'ny erectile? Naheno fanadihadiana iray milaza aho fa izany no izy? ”Ny fihetsiko voalohany sy ny eritreritro dia hoe:“ Tsia, tsia! Nolazaiko mazava tao amin'ny lahatsoratra hoe maninona no tsy izy, maharatsy izany ho an'ny hormonao ary noho izany dia mety hiteraka tsy fahatomombanan'ny erectile. ”Fa tsy te-hamily an-jambany ilay fanontaniana aho.
Mazava ho azy fa tsy fantatro ny zava-drehetra ary te hianatra araka izay azo atao aho. Araka ny efa voalaza dia ho anao sy ny filanao io fantsona io. Ka nandavaka lalina kokoa aho
Nahita fandinihana1 aho tamin'ny 2015 fa nahita fa ny lehilahy nisotro kafeina 170-375 milligram (mg) isan'andro dia tsy dia nitatitra ny erectile erectile (ED) noho ireo izay nanao an'io (tokony ho 2-3 kaopy ny kafe ). Na izany aza, tsy fantatry ny mpikaroka ny antony marina, fa nanana teôria izy ireo. Nanoratra izy ireo fa ny 'mekanisma biolojika natolotra dia ny kafeinina dia miteraka karazana vokatra ara-panafody'.
Izany dia mitarika ho amin'ny fanalefahana ny lalan-drà penile sy ny vatan-tsolika manify izay mandahatra ny vatan'ny zohy ary mampitombo ny fikorianan'ny rà mankany amin'ny filahiana. Raha atao teny hafa, miala sasatra ny lalan-drà sy ny hozatra malefaka, mihatsara ny fikorianan'ny rà, ary ny 'habakabaka mamontsina' amin'ny filahiana izay mandray anjara amin'ny fananganana dia feno ra mora kokoa. Okay, toa teôria mahafinaritra izany.
Hitan'ny mpikaroka ihany koa fa “tsy mahita rohy misy eo amin'ny kafe sy ny fitombon'ny rà mandriaka” izy ireo. Toy ny ankamaroan'ny fisedrana ara-pitsaboana, dia misy lesoka foana ary tsy dia tsara ny endriny. Nandalina lalindalina kokoa ny teôria momba ny 'fikorianan'ny rà' aho ary misy ny fanadihadiana sasany izay mampiseho ny fanatsarana ny fikorianan'ny rà mankany amin'ny ati-doha noho ny kafeinina izay misy vokany mifanohitra amin'izany, ka nahatonga ny vasoconstriction ary noho izany dia ratsy ny fikorianan'ny rà.3 Ka ny vokatra tsara rehetra dia nesorina taty aoriana.
Ny fehiny dia tsy misy dikany na inona na inona ireo. Araka ny voalaza tao amin'ny lahatsoratro voalohany, ny stimulants toy ny kafeinina dia miteraka tsindrona amin'ny hormonina miady saina toy ny kortisol sy ny adrenaline / epinefrine izay mampihena ny haavon'ny testosterone ary IZAO dia hitarika hatrany amin'ny fihenan'ny fananganana. Tsy lazaina intsony fa ny kafeinina koa dia mampitombo ny tebiteby, izay mampihena ny fahombiazany.
Ny tanjonao dia ny fanatsarana ny hormonina anao foana, dia izay! Ny haavon'ny hormone sy ny fifandanjana tsara indrindra dia ny vahaolana voajanahary tsara indrindra amin'ny fanatsarana ny fahasalamana sy ny fananganana. Hevitra tsotra, saingy sarotra ampiharina. Eo ambanin'ity lahatsoratra ity dia manana rohy manan-danja roa aho izay tokony hojerenao anio.
Ny iray dia mety amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany ho an'izay mandany ny vokatra kafeina toy ny kafe, zava-pisotro misy angovo, manaitaitra mialoha ny fampihetseham-batana na vokatra mitovy amin'izany. Ary ny iray hafa dia vahaolana voadinika amin'ny klinika izay manampy amin'ny fanatsarana ny hormona, hampitombo ny haavon'ny testosterone, izay mitarika fananganana tsaratsara kokoa sy ny filan'ny nofo - ara-batana sy ara-pientanam-po. Tianao ve izany? Tsindrio ny bokotra mitovy aminy.
Misaotra nihaino ary mirary tontolo andro sambatra sy salama!
Inona avy ireo sakafo mety hamono ny homamiadan'ny prostaty?
Tsy misy manokanasakafona recette izayafakamivantanamamono homamiadan'ny prostatysela. SASANYsakafo izaymety hanampy amin'nyhomamiadan'ny prostatyny fisorohana sy ny fanakanana ny famerenana amin'ny laoniny dia ao koaENTANA NOVOKARINAmisy lycopene, tsaramaso, dite maitso, hazo fijalianalegiomaary voankazo toy ny cranberry, frezy, blueberry ary ampongabendanitra.31 mart 2021
(mozika fitaovana manaitaitra) - Tiako ny mamaha olana. Te-hiditra amin'izy ireo fotsiny aho ary raha manao fahadisoana 10 aho dia tsara izany, hoesoriko tsy ho azony ireo hadisoana 10 ireo ary ho hitako izay mety hatao. Profesora momba ny injeniera mekanika ao amin'ny UC Berkeley tiako foana ny manao fanatanjahan-tena.
tanjaka sy hery maharitra
Mihazakazaka hatraiza hatraiza aho. Tsy nipetraka tao anaty fiara mihitsy aho. Nanomboka baseball kely niaraka tamin'ny zanako lahy aho tamin'izaho 10 na 11 taona.
Voamarina fa voan'ny homamiadana aho tamin'ny novambra 2014 taorian'ny taona lava sy tapany tsy fahazoana aina nandritra ny taona lava sy tapany tsy nahazoana aina nandritra ny taona iray ary indray mandeha dia nanao graf kely fotsiny aho dia niverina haingana be . Tadidiko ny nieritreretako, tamin'ity, ity, tiako holazaina, tsy ho velona afaka telo volana aho. Ny biopsy dia naneho homamiadan'ny kanseran'ny prostaty.
Niitatra tany amin'ny lymph sy ny faritra sasany amin'ny nerveau ao amin'ny taolako sy ny tratrako, nanomboka ny fitsaboana hormonina ny ampitson'iny ary avy hatrany dia nanomboka ny fitsaboana simika - Rehefa hitanay fa io no fizahana aretina nataon'i Andy dia fantatray fa ratsy izany. Voalohany, nikaroka toy ny adala aho, misy fianarana ve? Heveriko fa ny toetran'ny aretina dia tsy nisy na inona na inona teto. - Ary nanoro hevitra anay ny namana tao amin'ny MD Anderson any Houston.
Johanna dia nanao be ny legwork mba hahatanteraka izany. Fantatrao, heveriko fa raha tsy teo i Johanna mba hanampy ahy tamin'ny lozisialy, ankoatry ny zavatra hafa, mampatahotra loatra. Saingy nisy olona ampy nampahery anay fa tsy maintsy mandeha indray mandeha.
Tsy mampaninona ahy ny mandeha mihitsy. Tena mahatonga ahy hahatsapa ho toy ny hoe mandray zavatra lehibe tokoa aho ary manao izay rehetra azoko atao. Nanana fandidiana tao aho tamin'ny volana Jona 2015 ary nanomboka ny fitsapana ara-pitsaboana ahy latsaky ny herintaona taorian'ny nahitako ny aretina. - Nahazo immunotherapy antsoina hoe asipilimumab na Yervoy i Andy.
Izy io dia fanafody manaparitaka vonjimaika ny freins amin'ny sela T, izay sela manefitra manampy amin'ny ady amin'ny homamiadana. - Ary ity misy ity safidy ity amin'ny zavatra mahaliana. Eny, nampatahotra kely ihany koa satria misy ireo vokany rehetra ireo, saingy teo daholo izahay.
Te handroso fotsiny izahay ary hahatanteraka izany - tokony homena fatra ipilimumab efatra isaky ny telo herinandro. Fitsaboana telo ihany no niafarako tamin'ny farany - i Andy dia tena namolavola ny iray amin'ireo fiatraikany mahazatra indrindra amin'ity immunotherapy ity izay nanafihan'ny sela fiarovan'ny hoditra ny hodiny ary niteraka fivontosana. Na izany aza, i Andy dia tena nanana ny iray amin'ireo fanehoan-kevitra tsara indrindra hitanay tamin'ny homamiadan'ny prostaty - Dr.
Nilaza i Subudhi fa fantatrao fa miakatra tsara ny hery fiarovanao ary tsy hahazo izany fatra fahaefatra izany izahay. Saingy nilaza izy ireo fa tsy mahazatra izany. Tena nianatra nanao ny doka ianao. - Nanohitra ny olana rehetra i Andy.
Ho an'ireo marary toa an'i Andy, ny fahavelomana mediana dia mety ho refesina tao anatin'ny roa ka hatramin'ny efa-taona ary mino aho fa io fandinihana io dia nanova be izany faminaniana izany. Herintaona taorian'ny nanombohany ny fitsaboana azy dia nandefa sariny tamiko izy ary nilaza hoe: 'Hivoaka mandritra ny herintaona aho ary avy eo dia nozaraiko tamin'ny hafa' avy amin'ny ekipanay ary nilaza fa izany no antony anaovanay izay ataontsika. - Nanome fanantenana lehibe ahy ny fandraisana anjara amin'ny fandinihana.
Herintaona sy tapany aorian'izay ny tsimokaretina ary mahatsapa tena tsara aho. Mavitrika aho, na dia nanana fandrosoana kely tao amin'ny PSAI aza aho, feno fankasitrahana noho ny fandraisako anjara tamin'ny fandalinana, ary hanao doka hafa aho raha vantany vao manana fotoana mety.- Mandalo fitsaboana ara-pahasalamana sy tsy misy karazana fitsaboana fa ny taona lasa dia fandresena lehibe ho ahy.
Izany no fanantenana lehibe hafa. Misy ny fandrosoana amin'ny fotoana rehetra. Mahagaga ahy ny fiovana haingana. - Immunotherapy dia tena ho fitsaboana vaovao sy maharitra ho an'ny homamiadana.
Raha jerena fa ny Ivotoerana Fikarohana momba ny homamiadana no tanjona voalohany dia ny hampitombo ny famatsiam-bola sy ny fahatakarana ny immunotherapy. Toa zavatra mahafinaritra izany ary hanova fiainana maro ho lasa tsara kokoa amin'ny farany. (mozika fitaovana manaitaitra)
Mampihena ny haavon'ny PSA ve ny kafe?
Afaka misotro toaka ve sakafevaliny mihena amin'ny fihinanana? Ny alikaola sy zava-pisotro misy kafeinina dia tsy antony mampidi-doza homamiadan'ny prostaty ary tsy hisy fiantraikany amin'izanyHaavo PSA.4 Sep 2020
Andao hodinihintsika izay ao ambadiky ny prostaty mihalehibe izay mety hanelingelina ny fivalananao. Rehefa mihalehibe ny lehilahy dia mihalehibe tokoa ny prostaty ary mijery ny toerana misy ilay prostate. Tatavia urinary Rehefa manitatra ny prostate ianao dia mihidy ity fantsona ity ary simba ny fahafahanao mimi.
Hanome fanafody sasany toa ny Flomax, antibiotika ny dokotera ary angamba hanao fitsapana ra ianao ary hahita anao afaka enim-bolana fa ny fanontaniako dia inona no mahatonga ilay prostate mihabe. Raha mijery ny hormonina rehetra ianao, dia azo zaraina roa sokajy roa ny sokajy iray antsoina hoe anabolika ary ny sokajy iray dia ny catabolic ankehitriny, ny anabolika dia misy ifandraisany amin'ny fananganana zavatra iray, ary ny catabolic dia midika hoe mandrava ny sasany ny anzima izay ao anaty sakafisin'izy ireo dia manapotika ny asidra amine, asidra matavy, glucose sns, ary avy eo manana ny hormonina anabolika miditra ianao ary ento miakatra ireto takela-by ireto ary manaova ny tavy ao aminy.
Rehefa mihalehibe ny prostaty dia miharihary fa manana ny marina izany zavatra anabolika izany ianao, raha mijery ireo hormonina anabolika rehetra isika dia manana prolactin ary angamba efa naheno momba ny prolactine amin'ny vehivavy mampinono ianao, fa ny lehilahy kosa manana prolactin koa ary raha avo loatra ny prolactin dia azo antoka fa mampitombo ny haben'ny prostate ary ny estrogen mihitsy dia afaka mampitombo ny haben'ny prostate ary ny estrogen koa dia mampitombo ny famoahana ny prolactin ka manana hormonina hafa toa ny DHT ianao, endrika testosterone mahery tokoa ary androgens Cortisol hormonina fitomboana igf isa voalohany izay karazana toy ny fanitarana ny hormonina fitomboana novokarin'ny atiny, entanin'ny atin'ny fitomboan'ny hormona dia hampitombo ny prostaty ary manana Pro Gesterone sy Insulin ianao izay hormonina anabolika mahery vaika. . Ity ary ity misy fijerena inona ny sakafo na zavatra misy ny ankamaroan'ireny hormonina ireny izay mety ho laninao matetika tsy tapaka Ny ronono dia singa anabolika mahery vaika izay namboarina ho fromazy. Ny yogora kefir sy ronono dia misy ny ankamaroan'ireny hormonina anabolika ireny.
Ka raha manana olana amin'ny fikaoana ianao na mihalehibe ny prostaty dia mila ajanonao 100 isan-jato ny vokatra ronono sy ronono ka raha mihalehibe ny prostaty na manana olana amin'ny fivalanana dia mila manala ny siramamy ianao ary mandeha amin'ny drafitra ketônika. Raha vaovao amin'ny fantsonao ianao dia hanampy rohy eto ambany aho ary manana estrogen izahay, okay ka ny estrogen dia mety avy amin'ny loharano maro samihafa, ny soja dia loharano estrogen iray lehibe. Ka raha mihinana zavatra toy ny ronono soja na proteinina soja mitoka-monina proteinina ianao, ary angamba fihintsanana fihinanana izay raisinao na tsia, rehefa mihinana sakafo biolojika ianao, dia ny legioma na sakafo be otrikaina be otrikaina manahaka ny estrogen no anananao.
Mety ho antony lehibe mampitombo ny haben'ny prostaty anao izany. Betsaka ny olona mandray fanafody voajanahary ho an'ny prostaty toy ny palma ary satria ny palmetto sira dia manakana ny anzima sasany izay mamadika ny testosterone ho endrika testosterone mahery vaika antsoina hoe DHT izay afaka manitatra ny prostaty, zavatra iray izay tsy mety miasa ka mamporisika ny ronono aho ny vokatra dia manapaka ny zinc sy ny lycopene voatavo ankehitriny, ny lycopene dia manana fikarohana tsara ihany koa izay afaka manampy amin'ny fihenan'ny prostate ary mety ho be voatabia, noho izany dia ho sakafo tsara ny voatabia raha manana prostate mihabe ianao. Ka raha misakafo ianao na te-hanao olona manana prostaty mihalehibe, tsy keto mahasalama sy fifadian-kanina miserana fotsiny, fa mihinana legioma miiba kokoa aho indrindra ny kale satria izany - mifantoha eto amin'ny fisorohana ny manodidina anao, fa ahoana kosa ny fanamafisana ny hery fiarovanao ny rafitra izay banga amin'ity fampianarana ity dia mampiseho anao ny fomba tsy ahitanao bala ary ny fomba hileferanao sy hanoherana ny manodidina anao tsaratsara kokoa amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny hery fiarovanao manokana, apetrako eo ambanin'ny famaritana eo amin'ny farany ambany ny fikarohana ary misoratra anarana anio
Afaka miaina 20 taona amin'ny homamiadan'ny prostaty ve ianao?
Lehilahy voan'ny fivontosana Gleason 7 sy 8 ka hatramin'ny 10 no hita fa atahorana ho faty noho izanyhomamiadan'ny prostaty. rehefa20 taona, 3 tamin'ireo marary 217 ihany no velona. Ireo lehilahy voan'ny aretina antonony dia atahorana hanangona eo anelanelanyhomamiadan'ny prostatyfandrosoana aorian'ny20 taonany fanarahana.
Ratsy ho an'ny prostaty ve ny labiera?
Ny fanadihadiana iray nahitana lehilahy 3 927 tao Greater Montreal dia nahitana fa misotro alabieraisan'andro mandritra ny fotoana maharitra dia mifandray amin'ny fitomboan'ny risika mahery setraprostatehomamiadana.5 Sep 2018
Inona no fanatanjahan-tena mety amin'ny prostate?
Karazan-karazanyfanazaran-tenaafakamanampyho an'ny lehilahy miaraka amin'nyprostateolana sa OAB. Kegelfanazaran-tenaafaka manatanjaka sy mampiofana ny hozatry ny valanoranonao mba hifehezana ny fivalanana.fanazaran-tenatoy ny mandeha an-tongotra, mihazakazaka, milomano ary tenisy koaMAHASOA.
Tsara ve ny akondro amin'ny homamiadan'ny prostaty?
Ireo valiny ireo dia manondro ny fitrandrahana methanol an'nyakondrony peel dia afaka manakana ny 5alpha-reductase ary mety hoilainaamin'ny fitsaboana ny benignprostatehyperplasia.7 sept 2009
Mety amin'ny prostate ve ny divay mena?
Ny fanadihadiana vaovao dia mampiseho lehilahy misotro vera efatra na mihoatradivay menaisan-kerinandro dia manana risika ambany 50% ambanyprostatehomamiadana noho ny tsy misotro. Ho fanampin'izany, hitan'ny mpikaroka fadivay menany vokatra fiarovana dia toa matanjaka kokoa noho ny endrika mampidi-doza sy mahery setra indrindraprostatehomamiadana.23 Sep 2004
Ahoana no hamonoan'ny homamiadan'ny prostaty anao amin'ny farany?
indrindracancersela afaka amin'nyprostatematy. Indraindray kosa dia miparitaka any amin'ny taova hafa izy ireo ary manomboka fivontosana vaovao. Advancedhomamiadan'ny prostatymatetika dia mizotra mankamin'ny lymph node na taolana alohan'ny hiparitahan'ny taova hafa. Tsy dia mahazatra loatra izany dia mihanaka amin'ny havokavoka, aty na ati-doha.
Misy tafavoaka velona amin'ny homamiadan'ny prostaty amin'ny dingana 4 ve?
sehatra-Kanseran'ny Prostate 4(IV)
Ity no faranysehatranyhomamiadan'ny prostatyary mamaritra ny afivontosanafamananamiparitaka amin'ny faritra hafa amin'ny vatana, ao anatin'izany ny lymph node, havokavoka, aty, taolana, na tatavia. Ho an'ireokansera, ny 5 taonavelonany tahan'ny dia 29%.
Ahoana no ifandraisan'ny kafe amin'ny risika homamiadan'ny prostaty?
Ny mpikaroka dia nanisa fa efa ho 1 isan-jato ny fihenan'ny risika isaky ny kapoaka kafe isan'andro. Efatra ambin'ny folo amin'ireo fanadihadiana no noheverina ho avo lenta, tsy dia atahorana ny fitongilanana, ary ny haben'ny santionany dia manome tanjaka lehibe.
Karazana homamiadana inona no azonao avy amin'ny fisotroana kafe?
Hitan'izy ireo ihany koa fa ny fisotroana kafe dia tsy antony mahatonga ny tratran'ny tratra, ny sarakaty ary ny homamiadan'ny prostaty, fa mety hampihena ny loza ateraky ny homamiadan'ny endometrium sy ny homamiadan'ny aty. Ny porofo dia notsaraina fa tsy ampy amin'ny karazana homamiadana hafa.
Ratsy ve ny misotro kaopy kafe isan'andro?
Ny fandinihana iray hafa momba ny fihinanana kafe dia nilaza fa ny kaopy kafe efatra na mihoatra isan'andro dia mety hitarika amin'ny fihenan'ny risika fiverenan'ny homamiadan'ny prostaty sy ny fivoaran'ny aretina.